ရဲစခန်းကထုတ်တဲ့ ပုံမှာ မလှလို့ လှတဲ့ပုံနဲ့ ပြန်ပြောင်းခိုင်းခဲ့တဲ့ တရားခံပြေး – အောငျနိုငျသူ
ရဲစခန်းကထုတ်တဲ့ ပုံမှာ မလှလို့ လှတဲ့ပုံနဲ့ ပြန်ပြောင်းခိုင်းခဲ့တဲ့ တရားခံပြေး
မိန်းကလေးအများစုက တော်တော်အလှကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတာတော့ ယုံသွားပါပြီနော်။ ဘာလို့ဆိုတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်တဲ့ အလိုရှိသူစာရင်းထဲကဓာတ်ပုံက လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်ကပုံဖြစ်နေပြီးတော့ ရုပ်ဆိုးတဲ့ အတွက်ကြောင့်
ပုံအသစ်နဲ့ ပြန်လဲပေးဖို့ Brislane လို့ အမည်ရတဲ့ တရားခံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်က တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း news.com. au သတင်းဌာနရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ သိရှိရတာ ဖြစ်ပါတယ်။နယူးကာဆယ်ရဲတပ်ဖွဲ့(NSW) ကနေပြီး Facebook မှ
တစ်ဆင့် အလိုရှိနေတဲ့ လူဆိုးစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီစာရင်းထဲမှာ ခိုးမှုနဲ့ ရဲတွေအလိုရှိနေတဲ့ Brislane ပုံလည်းပါရှိခဲ့တာပါ။ ထိုဓာတ်ပုံက လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်ကတည်းကဓာတ်ပုံဖြစ်ပြီး အဆိုပါပုံထဲမှာ Brislane ဟာ အနည်းငယ်
မသေမသပ်ဖြစ်နေတာပါ။ ဆံပင်ကလည်း ဆံထုံးပုံစံကြီးဖြစ်နေပြီးတော့ ပခုံးနားမှာလည်း တက်တူးတွေနဲ့ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကိုတွေ့တဲ့လူတော်တော်များများဟာ Brislane ကို ရုပ်ဆိုးကြောင်း၊ သူခိုးရုပ်ပေါက်ကြောင်း၊
လုပ်ရပ်နဲ့ မျက်နှာနဲ့လိုက်ကြောင်း အစရှိသဖြင့် ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ကာ comment တွေ ရေးသားခဲ့ကြတာပါ။ နယူးကာဆယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ကတောင်မှ နောက်ဆုံးမနေနိုင်တော့ဘဲ
ကျေးဇူးပြုပြီး ရိုင်းစိုင်းတဲ့ comment တွေမရေးကြပါနဲ့ လို့တောင် ဝင်ရေးရခဲ့တာပါတဲ့။အခုလိုမျိုး ဖြစ်နေတာကို နောက်ဆုံး Brislane တွေ့သွားတဲ့အခါမှာတော့ ဒီပုံရိုက်ထားတာ တော်တော်ကြာပါပြီိ စိတ်လျှော့ကြပါရှင်။
ကျွန်မပုံစံက အဲဒီလိုရုပ်မဟုတ်တော့ပါဘူး အစရှိသဖြင့် Brislane က ရဲတပ်ဖွဲရဲ့ ပို့စ်အောက်မှာ comment ဝင်ရေးခဲ့တာပါတဲ့။ ဒါကိုတွေ့သွားတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ Brislane ရေ၊ ငါတို့မင်းကိုမရှာခင်
မင်ကိုယ်တိုင်ရဲစခန်းကို လာလိုက်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ် လို့ နယူးကာဆယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က comment ရေးခဲ့တာပါ။ဒါကို Brislane က ချက်ချင်း selfie ပုံရိုက်ပြီး ဒါက
သူ့ပုံအစစ်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့က တင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံက (၂၀၁၅) ခုနှစ်က ဓာတ်ပုံဖြစ်ကြောင်း ၊ အခုလက်ရှိပုံနဲ့ အလိုရှိစာရင်းထဲက ဓာတ်ပုံကို ပြန်လဲပေးဖို့ ပြောခဲ့ကြောင်း သိရတာပါနော်။credit
Unicode…ရဲစခနျးကထုတျတဲ့ ပုံမာ မလလို့ လတဲ့ပုံနဲ့ ပွနျပွောငျးခိုငျးခဲ့တဲ့ တရားခံပွေး
မိနျးကလေးအမြားစုက တျောတျောအလကွိုကျတတျတယျဆိုတာတော့ ယုံသှားပါပွီနျော။ ဘာလို့ဆိုတော့ ရဲတပျဖှဲ့က ထုတျပွနျတဲ့ အလိုရသူစာရငျးထဲကဓာတျပုံက လှနျခဲ့တဲ့ ၅နဈကပုံဖွဈနပွေီးတော့ ရုပျဆိုးတဲ့ အတှကျကွောငျ့
ပုံအသဈနဲ့ ပွနျလဲပေးဖို့ Brislane လို့ အမညျရတဲ့ တရားခံအမြိုးသမီးတဈယောကျက တောငျးဆိုခဲ့ကွောငျး news.com. au သတငျးဌာနရဲ့ ဖျောပွခကျြအရ သိရရတာ ဖွဈပါတယျ။နယူးကာဆယျရဲတပျဖှဲ့(NSW) ကနပွေီး Facebook မ
တဈဆငျ့ အလိုရနတေဲ့ လူဆိုးစာရငျးကို ထုတျပွနျခဲ့တာပါ။ အဲဒီစာရငျးထဲမာ ခိုးမနဲ့ ရဲတှအေလိုရနတေဲ့ Brislane ပုံလညျးပါရခဲ့တာပါ။ ထိုဓာတျပုံက လှနျခဲ့တဲ့ ၅နဈကတညျးကဓာတျပုံဖွဈပွီး အဆိုပါပုံထဲမာ Brislane ဟာ အနညျးငယျ
မသမေသပျဖွဈနတောပါ။ ဆံပငျကလညျး ဆံထုံးပုံစံကွီးဖွဈနပွေီးတော့ ပခုံးနားမာလညျး တကျတူးတှနေဲ့ ဖွဈနပေါတယျ။ ဒါကိုတှတေဲ့လူတျောတျောမြားမြားဟာ Brislane ကို ရုပျဆိုးကွောငျး၊ သူခိုးရုပျပေါကျကွောငျး၊
လုပျရပျနဲ့ မကျြနာနဲ့လိုကျကွောငျး အစရသဖွငျ့ ဝိုငျးဝနျးတိုကျခိုကျကာ comment တှေ ရေးသားခဲ့ကွတာပါ။ နယူးကာဆယျ ရဲတပျဖှဲ့ကတောငျမ နောကျဆုံးမနနေိုငျတော့ဘဲ
ကြေးဇူးပွုပွီး ရိုငျးစိုငျးတဲ့ comment တှမေရေးကွပါနဲ့ လို့တောငျ ဝငျရေးရခဲ့တာပါတဲ့။အခုလိုမြိုး ဖွဈနတောကို နောကျဆုံး Brislane တှသှေ့ားတဲ့အခါမာတော့ ဒီပုံရိုကျထားတာ တျောတျောကွာပါပွီ စိတျလြာ့ကွပါရငျ။
ကြှနျမပုံစံက အဲဒီလိုရုပျမဟုတျတော့ပါဘူး အစရသဖွငျ့ Brislane က ရဲတပျဖှဲရဲ့ ပို့ဈအောကျမာ comment ဝငျရေးခဲ့တာပါတဲ့။ ဒါကိုတှသှေ့ားတဲ့ ရဲတပျဖှဲ့ကတော့ Brislane ရေ၊ ငါတို့မငျးကိုမရာခငျ
မငျကိုယျတိုငျရဲစခနျးကို လာလိုကျတာ အကောငျးဆုံးဖွဈမယျထငျတယျ လို့ နယူးကာဆယျရဲတပျဖှဲ့က comment ရေးခဲ့တာပါ။ဒါကို Brislane က ခကျြခငျြး selfie ပုံရိုကျပွီး ဒါက
သူ့ပုံအစဈဖွဈကွောငျး ၊ ရဲတပျဖှဲ့က တငျထားတဲ့ဓာတျပုံက (၂၀၁၅) ခုနဈက ဓာတျပုံဖွဈကွောငျး ၊ အခုလကျရပုံနဲ့ အလိုရစာရငျးထဲက ဓာတျပုံကို ပွနျလဲပေးဖို့ ပွောခဲ့ကွောငျး သိရတာပါနျော။credit